wararka maanta-arlaadii.net » Shabaab Oo Soo Bandhigay Ciidamadooda ku Sugan Buuraha Goolis
Markii ugu horeysay Warbaahinta Shabaab waxa ay soo bandhigeen Sawiro kala duwan oo muujinaya dagaalyahanada Shabaabka ah ee ka dagaalama Buuraha Golis ee Gobolka Bari.
Shabaab ayaa soo bandhigay muuqaalka Dagaalkii ay ku qaadeen deegaanka Af Urur, balse ka sokow dagaalkaasi, waxaa la arkayaa ciidamo kala duwan oo Shabaab ka tirsan, kuwaasi oo ku sugan dhulka dhagxaanta ah ee Buuraha Golis.
Meelaha ay ku sugan yihiin dagaalyahanada Shabaab ee Buuraha Galgala Gobolka Bari, ayaa waxa ay tahay meel ay adag tahay in si fudud looga saaro, marka la eego buuraha ku hareeraysan iyo sida Saldhigyada Militari ay uga sameysteen.
Khubarada dagaalka waxa ay ku tilmaameen meelaha Saldhigyada ay ka dhigteen Shabaab inay adag tahay xittaa duqeyn diyaaradeed in looga saaro, maadaama Buuraha hoostooda ay ku yaalaan godad waaweyn oo gambaad laga dhigan karo.
Ciidamo badan oo Shabaab ka tirsan ayaa ku sugan dhulkaasi, waxayna halkaa ka soo abaabulaan weerarada ka dhanka ah ciidamada Puntland.